Dhegeyso faallooyinkayada 'Podcast' oo faallo ka bixinaya WWDC 2016 | Wararka IPhone
Maalinta Isniinta ah munaasabadda furitaanka shirka sanadlaha ah ee Apple si loo horumariyodores, oo ah qodobka muhiimka ah ee soo bandhigaya mustaqbalka nidaamka shirkadeed ee shirkadda sanadka soo socda. Labadii saacadood iyo waxyarba soo bandhigiddu way socotey waxaan aragnay warka ku saabsan watchOS (Apple Watch), TVOS (Apple TV), macOS caan ah (Macintosh) iyo macruufka (iPhone iyo iPad).
Si ka duwan dareenkii ugu dambeeyay ee aan haynay sanadkii hore dhamaadkii soo bandhigida, oo ku dhamaatay xoogaa caajis, markan waxaan ku dhameysanay farxad wixii aan aragnay. Warar badan oo ku saabsan masraxa, qaar iyaga ka mid ah aad ayey muhiim u yihiin oo, ugu wanaagsan tahay dhammaantood, si ballaadhan ayaa loo qaybiyey. Nidaamyada oo dhami waxay ku biiri doonaan waxyaalo iyaga si weyn uga sii wanaajin doona, taas oo war weyn u ah dhammaanteenna kuwa isticmaala.
Qeybtan, sidee bay noqon kartaa haddii kale, Waxaan dib u eegnay dhammaan wararkii aan ku aragnay dhacdada la sheegay waana ka wada hadalnay aragtidayada gaarka ah. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad na dhageysato oo aad nala wadaagto fikradahaaga adoo adeegsanaya qiimeynta iTunes ama akoonkeena Twitter.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 7 × 11: dheji WWDC hangover
Waxaan kuu soo qaadaneynaa dhamaan shaashadaha wararka ee iOS 10 (2/2)
Telegram waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo Sawirka-Sawirka